Marais Masay : Fanotorana tany mampidi-doza -
AccueilRaharaham-pirenenaMarais Masay : Fanotorana tany mampidi-doza
Efa norarana teo aloha. Efa nanaovan’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE) fidinana ifotony ihany koa ka namoahan’izy ireo didy fandrarana amin’ny fanotorana ny etsy Marais Masay. Miverina manototra tany teo amin’ilay voarara tamin’ny voalohany ihany anefa ireo nahazo sy namoahana didy fandrarana tamin’izany. Tsy vitan’izay fa nofefen’izy ireo mihitsy ity tany etsy Marais Masay nototofana ity, amin’izao fotoana izao.
Araka ny fantatra mantsy, dia ilay efa nanototra tamin’ny voalohany izay efa namoahana didy fampitsaharana ny fanotorana ihany ireto miverina manototra sy mamefy izany toerana izany, etsy Marais Masay, ireto. Voalaza fa andiana Maorisianina no manao izany fanotorana tsy ara-dalàna izany. Izany hoe, Maorisianina maromaro no mitambatra manao ity fandikan-dalàna ity.
Voaporofo mantsy ankehitriny, fa tsy manana antotan-taratasy mirakitra ny fahazoan-dalana manototra sy mamefy io toerana io ireo andiana Maorisianina ireo. Raha efa namoaka didy mitondra ny Lah. 21883 tamin’ny 17 oktobra 2016 ny teo anivon’ny M2PATE mandrara fa tsy mahazo manao fanotorana, fananganana, famefena, sns amin’io toerana io, minia mandika izany ireto Maorisianina ireto satria dia mbola manao ny fanotofana sy famefena ihany izy ireo ankehitriny.
Araka ny tatitry ny polisin’ny Fanajariana ny Tany nanatanteraka fidinana ifotony teny an-toerana, ny 2 novambra teo, voalaza namingavinga ny didy mitondra ny Lah. 21883 navoakan’ny minisitera izy ireo. Teo ihany koa ny tsy fanajana ny fandrodanana nataon’ny M2PATE teo aloha teo.
Marihina anefa fa mampidi-doza tanteraka ity fanotorana tsy ara-dalàna nataon’ireo Maorisianina maromaro ireo etsy Marais Masay ity. Nambaran’ny filoham-pokontanin’Amboditsiry izay misahana iny faritra iny mantsy, mivarina ao amin’io dobon’ny Marais Masay io avokoa ny rano rehetra avy any ambony ao amin’ny tanànan’Amboditsiry rehetra rehefa avy ny orana. Noho izany, ho tsentsina avokoa ireo lakandrano rehetra mivarina ao ka hiteraka sy hampiteraka tondra-drano io fanotorana tsy ara-dalàna ataon’ireo Maorisianina io. Raha ny marina, isika izao efa ao anatin’ny vanim-potoan’ny orana, ary izay indrindra no mampanahy ireo mponina eny Amboditsiry sy ny mpampiasa lalana amin’iny Marais Masay iny amin’ny mety hisian’ny tondra-drano goavana amin’iny faritra iny rehefa mirotsaka ny orana. Hitera-doza ho an’ny mponina ity fanotorana tsy ara-dalàna ity raha toa ka tsy voajery haingana.